France inozivisa COVID kupfuura kwemabhawa, maresitorendi, dzimba dzemitambo uye zvitima, zvinomanikidzwa jabs kune vashandi vehutano
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » France inozivisa COVID kupfuura kwemabhawa, maresitorendi, dzimba dzemitambo uye zvitima, zvinomanikidzwa jabs kune vashandi vehutano
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mutungamiri weFrance, Emmanuel Macron
Kubaya kweCOVID-19 kwehuwandu hwevanhu hakuzove nemvumo mune ramangwana, asi Macron haana kutora sarudzo patafura.
Vanenge makumi matatu nezvitanhatu muzana vevanhu makumi matanhatu nematanhatu veFrance vakabaiwa jekiseni reCVV-36.
Mishonga yeCOVID-19 ichave inomanikidzwa kune vashandi vehutano muFrance.
Hurumende yeFrance haichazopa mahara maCOVID-19 bvunzo kubva mumatsutso zvichienda mberi.
Mune kero yeterevhizheni nhasi, Mutungamiri weFrance Emmanuel Macron audza vagari vekuFrance kuti vachatofanira kubaiwa nhomba kuti vakwanise kushanyira mabhawa, maresitorendi, dzimba dzemitambo, mabhaisikopo uye zvitima zvebhodhi, uye Covid-19 kupfura kunosungirwa kune vashandi vehutano veFrance.
Sekureva kwaMacron, majekiseni eCOVID-19 achamanikidzwa kune vehutano muFrance, uye "hutano kupasa" hunoratidza chinzvimbo chekubaiwa, kana muyedzo wakashata wecoronavirus, zvichakosha kukwira chitima kana kushanyira nzvimbo dzeruzhinji kubva muna Nyamavhuvhu. Vese vagari veFrance nevagari vanopfuura makore gumi nemaviri vachazoda kupfuura.
"Tichawedzera kupasa kwehutano zvakanyanya sezvinobvira kusundira vazhinji venyu sezvinobvira kuti vabaye jekiseni," akadaro Macron.
Kubaya kweCOVID-19 kwehuwandu hwevanhu hakuzove nemvumo mune ramangwana, asi Macron haana kutora sarudzo patafura. Kana huwandu hwehutachiwana husingakwiri, mutungamiri wenyika akayambira kuti acha "bvunza mubvunzo wekumanikidzwa kubaya vanhu vese veFrance."
Pamusoro pezvo, nepo kuongororwa kwePCR kwakaipa kuchakwanira kuwana "hutano kupasa," Macron akataura kuti hurumende haichazopa mahara maCOVID-19 bvunzo kubva mumatsutso zvichienda mberi.
Vanenge makumi matatu nezvitanhatu muzana vevanhu makumi matanhatu nematanhatu veFrance vakabaiwa jekiseni rakakwana vachipokana neCOVID-36, asi huwandu hwezviitiko zvitsva zvecoronavirus zvave zvichikwira zvakatsiga kubvira kutanga kwaChikunguru, zvichitungamirwa neanonyanya kutapukira Delta musiyano we COVID-19.
France ine “yakadzika midzi” yekudzivirira nhomba iyo ingangove isingafare neMacron yekutsamwa yekudzivirira.